कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्‍ततर्गत ६ प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्‍न, कहाँ कसले जिते ? - Abhiyan news
२० मंसिर २०७८, सोमबार ०३:१० अभियान न्यूजLeaveaComment on कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्‍ततर्गत ६ प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्‍न, कहाँ कसले जिते ?
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्‍ततर्गत ६ प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्‍न भएका छन् । प्रदेश २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा शनिबार प्रदेश कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन भएको थियो ।
कांग्रेस प्रदेश १ सभापतिमा उद्वव थापा विजयी भएका छन् । संस्थापन पक्षका थापाले पौडेल-कोइराला पक्षका गुरुराज घिमिरेलाई दुई मतले हराएका हुन् । सोमबार बिहान सार्वजनिक मतपरीणाम अनुसार थापाले ८४४ मत पाउँदा घिमिरेले ८४२ मत ल्याए । अन्य पदाधिकारीमा पनि संस्थापन पक्षको वर्चस्व छ ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिमा इन्द्र बानियाँ विजयी भएका छन् । संस्थापन पक्ष सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका बानियाँले १०८५ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रत्यासी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका उम्मेद्वार जगदिश्वर नरसिंह केसीले ९२७ मत प्राप्त गरे । बानियाँले १५८ मतान्तरले केसीलाई सभापतिमा पराजित गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा शुक्रराज शर्मा विजयी भएका छन् । शर्मा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका हुन् । उनले सभापति पदमा ८४ मतअन्तरले प्रदेशको नेतृत्व आफ्नो हातमा पारेका हुन्। कुल ११४६ मत खसेकोमा उनले ६१२ मत ल्याउँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अर्जुनप्रसाद जोशीले ५२८ मत ल्याए ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा अमरसिंह पुन निर्वाचित भएका छन् । उनी रामचन्द्र पौडेल पक्षका हुन् । सोमबार बिहान सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम परिणामअनुसार पुनले सभापतिका अर्का प्रत्यासी संस्थापन समूहका भरतकुमार शाहलाई ८५ मतले हराएका हुन् । सभापतिमा निर्वाचित पुनले ८५२ मत पाउँदा शाहले ७६७ मत ल्याए । पदाधिकारीमा पनि पुन प्यानलकै वर्चश्व छ ।
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशको सभापतिमा ललितजंग शाही विजयी भएका छन् । प्रदेश अधिवेशनअन्तर्गत शनिबार सम्पन्न मतदानबाट शाही ४२२ मत ल्याएर सभापितमा विजयी भएका हुन् । विजयी शाही सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भूपेन्द्रजंग शाहीले ३१७ मत ल्याएका हुन् । सभापतिका अर्का उम्मेदवार मोतिराम बमले भने सात मत मात्रै ल्याए ।
नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिमको सभापतिमा देउवा पक्षका वीरबहादुर बलायर विजयी भएका छन् । प्रदेशमा कुल खसेको मत १००३ मध्ये बलायरले ६८८ मत ल्याउँदा प्रतिस्पर्धी नारायणदत्त मिश्रले २८० मत्र मात्र ल्याए।
अब ६८ वर्ष पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउने
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार ११:४८ अभियान न्यूज
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब बजेट ल्याउँदै
२९ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०२:३३ अभियान न्यूज